musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » 17 vanhu vakakuvadzwa muLos Angeles bhomba kuputika kwetiraki
Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kuputika uku kwakazunungusa nharaunda, kupidigura mota dzepedyo, kupwanya magirazi nekukuvadza dzimba sezvo zvaitumira utsi hwakawanda mudenga.
Mapurisa eLos Angeles akange aswera zuva achibata hombarume yakakura yemoto kubva pamba.
16 kunze f vanhu gumi nevanomwe vakakuvara vakaendeswa kuchipatara.
Ikoko kwaive ne "kutadza kwakazara kweiyo mota yemidziyo," sekureva kweLAPD.
LAPD bhomba yechikwata kuyedza kuparadza murwi we zviwanikwa zvisiri pamutemo firework zvakaguma nekuputika kukuru kwakaparadza iyo Dhipatimendi reMapurisa reLos AngelesRori rine zvombo, rakakuvadza vanhu gumi nevanomwe, kusanganisira mapurisa gumi, uye raida kuburitswa kwedzimba dzepedyo.
Pakati pevanhu gumi nevanomwe vakakuvara, gumi nevatanhatu vakaendeswa kuchipatara nemumwe achiramba sarudzo yekutakurwa.
Kuputika kwakauya nguva dza7: 30 manheru eChitatu manheru mu 700 block yeEast 27th Street, uko mapurisa aive aswera zuva achitora cache yakakura yemoto kubva pamba. Vakasangana vangangoita makumi mana ekugadzira "coke can-saizi" zvishandiso zvine hupfu uye fuses pavari, uye mazana maviri madiki akafanana. Bato remabhomba rakavasarudza kuti "vashanduke zvakanyanya."
Midziyo iyi yakaendeswa kune "yakazara mota yemidziyo" ine kamuri yesimbi, iyo yakagadzirirwa kuisa zvinhu zvinoputika zvinogona kubviswa zvakachengeteka.
Pakaburitswa zvinhu zvinhu nguva pfupi yapfuura 7:30 pm neChitatu, pakanga paine "kukundikana kukuru kweiyo mota yemidziyo," sekureva kweLAPD.
Kusvika kumhuri pfumbamwe munharaunda dziri kutiza dzimba dzavo mushure mekuputika.
Dhipatimendi reMapurisa reLos Angeles rakati kuputika uku kuchaferefetwa nekufamba kwemazuva anotevera. Vaongorori vehurumende vanotarisirwa kusvika panzvimbo iyi neChina.